October 2021 - Online Hartha
October 31, 2021 by Online Hartha
လူသိနည်းတဲ့ ကြက်သွန်နီရဲ့အသုံးဝင်ပုံ (၇) မျိူး Antioxidants ကြွယ်ဝတဲ့ ကြက်သွန်နီ က ကင်ဆာရောဂါ၊ ဆီးချိုရောဂါနဲ့ အအေးမိဖျားနာခြင်းတို့ကို သက်သာပျောက်ကင်းစေတဲ့ အာ နိသင်ရှိပါတယ်။ ဒါတင်မကသေးပါဘူး၊ ကြက်သွန်နီကို အစားအသောက်ချက်ပြုတ်ပြင်ဆင်ရာမှာလည်း အသုံးပြုနိုင်သလို သတ္တုပစ္စည်းများ အရောင်မှိန်သွားလို့ ပြန်လည်တောက်ပြောင်လာအောင် ပြုလုပ်ရာမှာလည်း အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကြက်သွန်နီကို ဘယ်လိုနေရာတွေမှာ အသုံးပြုနိုင်သလဲ၊ ဘယ်လို အသုံးပြုရမလဲဆိုတာကို ဗဟုသုတအဖြစ်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ အင်းဆက်ပိုးမွှားများကို မောင်းထုတ်ဖို့ရန်အတွက်ခြင်နဲ့ အခြားအင်းဆက်တွေ ကိုယ့်ကို မကိုက်အောင် ကိုယ့်အနားမလာစေချင်ဘူးဆိုရင် သင့်ရဲ့ အသားအရေပေါ်သို့ ကြက်သွန်နီလေးနဲ့ ပွတ်တိုက်ပေးလိုက်ပါ။ အင်းဆက်အကိုက်ခံရတဲ့အခါ သက်သာစေခြင်း – အင်းဆက်တွေ အကိုက်ခံရတယ်၊ အတုပ်ခံရတယ်ဆိုရင်လည်း စောစောကနည်းလမ်းလေးကိုပဲ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ နာကျင်မှုဝေဒနာ သက်သာပျောက်ကင်းသွားပါလိမ့်မယ်။ လည် ချောင်းနာ သက်သာစေမယ့် အိမ်တွင်းကုထုံး – … Read more
မွေးထားတဲ့မြွေကြီး အစားမစားလို့ ဆေးခန်းသွားပြလိုက်သောအခါ
မွေးထားတဲ့မြွေကြီး အစားမစားလို့ ဆေးခန်းသွားပြသောအခါ အစာမစားတဲ့မြွေကြီး တခါက အသက် ၂၅ နှစ် အရွယ် အမျိုးသမီး တဦးဟာ စပါးကြီးမြွေ တကောင်ကို အိမ်မွေး တိရိစ္ဆာန်အဖြစ် မွေးထားပါတယ်။ ၄ မီတာလောက် ရှည်တဲ့ ထိုမြွေကြီးဟာ တနေ့မှာတော့ လုံးဝ အစာ မစားတော့ပါဘူး။ ဒီလိုနဲ့ မြွေကြီးက အစာ မစားတာ တပတ်လောက် ရှိလာတော့ အမျိုးသမီးကြီးက စိတ်ပူပြီး မြွေကြီးကို တိရိစ္ဆာန်ဆေးကုခန်းကို ခေါ်သွားပါတယ်။ ထိုအမျိုးသမီးကြီးရဲ့ ပြောပြချက်ကို နားးထောင်ပြီးနောက် တိရိစ္ဆာန် ဆရာဝန်က “အမနဲ့သူ ညဘက်အတူတူ အိပ်လား ၊အိပ်တဲ့အခါ အစ်မ တကိုယ်လုံးကို သူ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ ပတ်ပြီး အိပ်လား” လို့ မေးတယ်။ အဲ့ဒါနဲ့အမျိုးသမီးကြီးကလည်း” ဟုတ်ပါတယ် ညတိုင်း အဲ့ဒီလိုပဲ … Read more
ဆီပူ ၊ရေနွေးပူ တို့နဲ့အမြဲတစေ ထိတွေ့နေရသော အိမ်ရှင်မများအတွက် ဒီနည်းလေးက တကယ့်ကိုအဆင်ပြေစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဆီပူလောင်တာနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး နည်းလမ်းအမျိုးမျိုး၊ ဆေးနည်းအမျိုးမျိုးရှိတယ် ဆိုပေမယ့် အခုဖော်ပြပေးမယ့်နည်းလမ်းလေးကတော့ ထူးခြားတယ်လို့ပဲပြောရမယ်။ နည်းလမ်းကရိုးရှင်းလွန်းလို့ လျှော့မတွက်နဲ့နော်။ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်း ပြန်လည်မျှဝေပေးခဲ့တဲ့နည်းလေးပါ။ သူကိုယ်တိုင်အသုံးပြုခဲ့တဲ့ လက်တွေ့နည်းပါလို့ပြောပါရစေ။ ဆီပူလောင်ခဲ့သော်…. ဆီပူလောင်သည့်နေရာ ကို ဆီစိမ်း (အသုံးမပြုရသေးသည့်ဆီ)ဖြင့် ရွှဲနစ်နေအောင် ချက်ချင်းလိမ်းပေးပါ။ နာရီဝက်ခန့်ကြာလျှင် သက်သာပျောက်ကင်းသွာပါလိမ့်မည်။ ရေကြည်ဖောင်းမထ အမာရွတ်ကျန်ခဲ့မှာစိုးရိမ်စရာမလိုသည့်အတွက် ဒီနည်းလမ်းကို ယုံကြည်စွာနဲ့အသုံးပြုလိုက်ပါလို့ အကြံပြုပါရစေ…. ။ မေတ္တာဖြင့်…ပြန်လည်မျှဝေပေးပါနော်.. မူရင်းရေးသားသူ နှင့် ဓာတ်ပုံပိုင်ရှင်များအား လေးစားစွာဖြင့် Credit ပေးပါသည်။ ဆီပူ ၊ရေနွေးပူ တို့နဲ့အမြဲတစေ ထိတွေ့နေရသော အိမ်ရှင်မများအတွက်…. ဒီနည်းလေးက တကယ့်ကိုအဆင်ပြေစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဆီပူလောင်တာနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး နည်းလမ်းအမျိုးမျိုး၊ ဆေးနည်းအမျိုးမျိုးရှိတယ် ဆိုပေမယ့် အခုဖော်ပြပေးမယ့်နည်းလမ်းလေးကတော့ … Read more
October 30, 2021 by Online Hartha
တစ်ခါတုန်းက တိုင်းပြည်တစ်ပြည်မှာ အရင်းဆင်းရဲတဲ့ အဖွားအိုတစ်ယောက်ရှိသတဲ့..။ သူ့မှာပိုင်ဆိုင်တာဆိုလို့ လဲပြိုခါနီး တဲတစ်လံးရယ် ညစ်ပတ်ပြီး အရောင်မထွက်တော့တော့ ချူပ်ရာဗလပွ အဝတ်အစားတစ်စုံရယ် ကြက်မလေးတစ်ကောင်ရယ်ပဲရှိတယ်။ သူရဲ့ကြက်မလေးက သူ့အတွက် နေ့တိုင်း ကြက်ဥတစ်လုံး တစ်လုံးး ဥပေး တယ်။ အဲဒီကြက်ဥလေးနဲ့ အဖွားအိုက နေ့တိုင်းသူ့ရဲ့စားဝတ်နေရေးကို ဖြေရှင်းပြီးအသက်ရှင်နေခဲ့ရတယ်။ အဖွားအိုနေထိုင်တဲ့တိုင်းပြည်မှာ အစားကျူးတဲ့ ဘုရင်တစ်ပါး အုပ်ချုပ်နေတယ်။ တစ်နေ့မှာ ဘုရင်က တိုင်းပြည် ထဲမှာ ထူးဆန်းတဲ့ အမိန့်တစ်ခုကို မောင်းထုပြီး ကြေညာခဲ့တယ်။ အဲဒါအမိန့်က ဘာလဲဆိုတော့ လှည်းနေ လှေအောင်း မြင်းဇောင်း မကျန် တိုင်းပြည်မှာ ရှိတဲ့ တိုင်းသူပြည်သားတွေအားလုံး သူစားတော်ပွဲတည်ဘို့ အတွက်အသားဟင်းတစ်ခွက်လာ ပို့ရမယ်လို့ကြေညာမောင်းခတ်ခဲ့တယ်။ ဒီသတင်းကိုကြားတဲ့ တိုင်းသူပြည်သားတွေက အသားဟင်းတစ်ခွက်ပို့ဘို့ ပြင်ဆင်ကြတယ်။အဲဒီအထဲမှာ ကြက်မလေးတစ်ကောင်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ အဖွားအိုလဲ အပါအဝင်ပေါ့။ … Read more
အိပ်မက်ထဲမှာ မင်္ဂလာဆောင်ရတယ်လို့မြင်မက်တဲ့အခါ ဘာတွေဖြစ်တတ်သလဲ
၁။ စိတ်ကူးထဲကပုံစံ အမျိုးသား(သို့) အမျိုးသမီးနဲ့ လက်ထပ်ရတယ်လို့အိပ်မက်မက်တဲ့အခါ သင့်စိတ်ကူးထဲက လိုချင်တဲ့ ideal type လူနဲ့ လက်ထပ်ရတယ်လို့ အိပ်မက်မြင်မက်တာဟာ သင်မျှော်လင့်စောင့်စားနေတဲ့ ကြီးကျယ်ခမ်းနားမှုမျိုး မကြာခင် သင့်ဆီရောက်ရှိလာတော့မယ်လို့ ဆိုလိုခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ၂။ မင်္ဂလာပွဲမှာ တောက်ပခမ်းနားလှတဲ့ ဝတ်စုံကိုဝတ်ဆင်ထားရတယ်လို့ အိမ်မက်မြင်မက်လျှင် မင်္ဂလာပွဲတစ်ခုမှာ သင်ဟာအဓိက လူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး တောက်ပပြီး လှပလွန်းတဲ့ဝတ်စုံကို ဝတ်ဆင်ထားရတယ်လို့ အိပ်မက်မက်တာဟာ စိတ်ညစ်စရာ ကိစ္စရပ်တွေသင့်ဆီရောက်ရှိလာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ ၃။ ရည်းစားဟောင်းကို လက်ထပ်ရတယ်လို့အိပ်မက်မက်တဲ့အခါ ရည်းစားဟောင်းနဲ့ လက်ထက်ရတယ်လို့ အိပ်မက်မက်တာဟာ သင့်စိတ်တွေ ကစဥ့်ကလျားဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ လက္ခဏာတစ်ရပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ၄။ တစ်ယောက်မှ မင်္ဂလာပွဲကိုမလာဘူးလို့ အိပ်မက်မက်တဲ့အခါ ကိုယ်တိုင်ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ လက်ထပ်မင်္ဂလာပွဲကို တစ်စုံတစ်ယောက်မျှ တက်ရောက်ခြင်းမရှိဟု အိပ်မက်မြင်မက်တာဟာ သင်ကိုယ်တိုင်သတိမထားမိတဲ့ သင့်ရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကိုမကြာခင်သိရှိနိုင်တော့မယ်လို့ ဆိုလိုခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ၅။ ဘယ်သူမှမသိအောင် … Read more
အခိုးခံရတဲ့ I phoneကို နည်းပညာသုံးပြီး အိမ်အထိပြန်လိုက်ယူနိုင်ခဲ့တဲ့နည်းလမ်းကို မျှဝေပေးခဲ့တဲ့ မိန်းမချောလေး….
IOS နောက်ဆုံးဗားရှင်းတင်ထားတော့ ဟိုဘက်ကပါဝါပိတ်ထားတာတောင် ဖုန်းရဲ့တည်နေရာကိုဆက်တိုက်ပြပေးနေတာပါရှင့်..၊ ပျောက်ခါစကတော့ ပူထူပြီးiCloud ယော password ယောဘာတစ်ခုမှကိုမမှတ်မိ( ငိုဖို့ပဲသိတာ 😭 ) သွေးအေးအေးနဲ့ ည ၁၀ နာရီလောက် ရောက်မှ အိမ်ကဖုန်းထဲ ကိုယ် ICloud ထည့်ထားတာကိုသတိရပြီး..။ Find My phone ထဲကနေဝင်ရှာတော့မှ Location တန်းပေါ်လာတာ..၊ Location ကည ၁၀ နာရီလောက်မှသိရတာဆိုတော့ ဒီကာလကြီးအပြင်လည်းထွက်မရ ဘာမှလည်းလုပ်မရ..၊ တစ်ညလုံးလည်း အိမ်မရတော့ ဖုန်းတည်နေရာပဲထိုင်ကြည့်နေရတယ် ( နေရာရွေ့မှာစိုးလို့ ) မနက်ခင်းလင်းတာနဲ့ အစောကြီးထပြီး အဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကို လေးခါးခေါက်ပတ် တည်နေရာသေချာအောင် အရင်ရှာ..၊ တည်နေရာသေချာတော့မှ ရပ်ကွက်သက်ဆိုင်ရာလူကြီးနဲ့ နယ်ထိန်းတစ်ယောက်နဲ့ခေါ်ပြီး အဲ့အိမ်ထဲဝင်ရတယ်..။ တစ်ဆင့်ပြန်ဝယ်ထားတဲ့အိမ်ဖြစ်နေတော့ တော်တော်လေးကို အာပေါက်အောင်ပြောယူပြီး😑 နောက်ဆုံးတော့လည်းပြန်ရခဲ့ပါတယ်..။ ကံကောင်းသွားတာ တစ်ခုက … Read more
ချောင်းဆိုးပြီး အိပ်မရဖြစ်နေသူများအတွက် သဘာဝဆေးနည်း
October 29, 2021 by Online Hartha
ချောင်းဆိုးပြီး အိပ်မရ ဖြစ်နေသူများအတွက် သဘာဝဆေးနည်း လိုအပ်သော ပစ္စည်းများ ၁။ သံပုရာသီး (သို့မဟုတ်) ရှောက်သီး ၂။ ဆား ၃။ ပျားရည် အသုံးပြုနည်း သံပုရာသီး(သို့မဟုတ်)ရှောက်သီး ကို အပေါက်ဖောက်ပြီး ဆားအပြည့်ထည့်ပါ။ ထို့နောက် မီးဖုတ်ပါ။ ရလာသော သံပုရာသီးဆားမီးဖုတ် (သို့မဟုတ်) ရှောက်သီးဆားမီးဖုတ် အရည်ကို ပျားရည်နဲ့ လျက်ပေးပါ ။ အိပ်မရအောင်ဆိုးနေတဲ့ ချောင်း ဤနည်းဖြင့် ပျောက်ကင်းပါလိမ့်မည်။ ဆီးချို ရှိသူများ ပျားရည် မထည့်ပါနဲ့။ Creditဆရာဦးရွှေသုဝဏ် Unicode Version ခြောငျးဆိုးပွီး အိပျမရ ဖွဈနသေူမြားအတှကျ သဘာဝဆေးနညျး လိုအပျသော ပစ်စညျးမြား ၁။ သံပုရာသီး (သို့မဟုတျ) ရှောကျသီး ၂။ ဆား ၃။ ပြားရညျ အသုံးပွုနညျး … Read more